Usoro kacha mma nke B Rotary Tablet Press Manufacturer and Factory | Keyuan
B usoro Rotary Tablet Press
Ụdị pịpị ugboro abụọ na mbadamba ihe nwere otu akụkụ. Ọ na-eji ntụpọ ZP iji pịa akụrụngwa granular n'ime mbadamba gburugburu na mbadamba nwere ụdị pụrụ iche nke nkọwa dị iche iche.
1.Nwere ngwaọrụ na -ahụ na nkwụsi ike nke ihe dị iche na ịdị mma dị arọ.
2. igwe anaghị agba nchara mkpuchi mkpuchi emechiela kpamkpam. Akụkụ niile na-emetụta ọgwụ a bụ nke igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ mesoo ya site n'elu, na-adịghị egbu egbu ma na-eguzogide ọgwụ.
3.turntable elu mgbe ọgwụgwọ pụrụ iche, nwere ike igbochi mmetọ obe.
4. akụkụ anọ niile nke ọnụ ụlọ mbadamba maka plexiglass transperent, enwere ike mepee ya, nhicha na ndozi dị mfe n'ime.
5.vreable ugboro ugboro nzọụkwụ-erughị ọsọ na-achịkwa ngwaọrụ, dị mfe iji rụọ ọrụ, nchekwa na ntụkwasị obi.
Nhazi usoro hydraulic nwere ezi uche, nke nwere ike idowe nkwụsi ike nke sistemụ hydraulic.
7.equipped na ngwaọrụ nchedo oke ibu, mgbe oke nrụgide, nwere ike kwụsị na -akpaghị aka.
8.with ọrụ nke mkpakọ mkpakọ na isi mkpakọ, nke nwere ike melite ogo mbadamba.
Nnukwu nrụgide (kN)
Max. dia. Mbadamba ụrọ (mm)
13, pụrụ iche ekara 16）
Max. omimi nke ndochi (mm)
Max. ọkpụrụkpụ nke mbadamba (mm)
Turret ọsọ (r/min)
Max.production ike (PC/hour)
Ibu oke (n'arọ)
Igwe na -arụ ọrụ nke ọma. Na mgbakwunye na ịme ọgwụ okirikiri. Ọ nwekwara ike mepụta eserese oge okirikiri, okirikiri ma ọ bụ abụọ. Ọ nwere ike wepụta elekere otu akwa ma ọ bụ elekere okpukpu abụọ iji gboo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa.
Igwe na -emezu ihe GMP chọrọ. A na -ekewa ụlọ ịpị mbadamba ihe na usoro ịnya ụgbọ ala iji gbochie mmetọ. Ejiri igwe anaghị agba nchara API ma ọ bụ galvanized, anaghị egbu egbu, na-eguzogide ma na-eguzogide nchara.
Isi igwe nke ụdị B na-arụ ọrụ mbadamba mbadamba ọtụtụ na-anọpụ iche na ngalaba njikwa ọrụ, nke dabara adaba maka ịrụ ọrụ yana ndozi.
A na -eji PLC nyochaa isi ọrụ, data mmepụta na mmejọ nke mbadamba mbadamba. A na -eji ihe ntụgharị ugboro ugboro maka nhazi ọsọ, ụkpụrụ enweghị ike, ọtụtụ usoro ọsọ yana ọrụ a pụrụ ịdabere na ya. N'otu oge ahụ, a na -ahọrọ moto ntụgharị ugboro ugboro iji hụ na ụkpụrụ ọsọ ike oge niile na torque na -agbanwe agbanwe iji mezuo ihe torque chọrọ n'ime oke mgbasa ozi akọwapụtara.
Nke gara aga: E usoro Rotary Tablet Press
Osote: GYC100 akọrọ granulator
Obere Mbadamba Mbadamba ụrọ
Akwụkwọ mpịakọta Rotary maka swiiti
Mbadamba Mbadamba Maka Ọgwụ
Mbadamba Mbadamba ụrọ
ZP45 Rotary Tablet Pịa
E usoro Rotary Tablet Press
ZPL usoro Rotary Tablet Press